ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသည် . . . – Eleven Media Group
ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသည် . . .
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ အခြေစိုက် စီးပွားရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာဌာန (IEP) က ထုတ်ပြန်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးအညွှန်းကိန်း (GPI) အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့် ၁၅ ဆင့် ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး အဆင့် ၁၂၂ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း၌ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉ နိုင်ငံအနက် မြောက်ကိုရီးယား (အဆင့် ၁၅၀) နှင့် ဖိလစ်ပိုင် (အဆင့် ၁၃၇ ) တို့ပြီးပါက တတိယမြောက် အဆင့်အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း၌ အဆင့်အကြီးအကျယ် ကျဆင်းသွားသောနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များ (မူရင်း၌ ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ) တို့အပေါ် လုပ်ဆောင်နေဆဲ စစ်ဆင်ရေးများကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ ကျဆင်းရခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ယခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲများ နီးကပ်လာချိန်၌ ၀န်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်၏ အတိုက်အခံများအပေါ် ဖိနှိပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကျဆင်းရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသော တောင်အာရှဒေသမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည်လည်း နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် အဆင့် ၁၀ ဆင့် ကျဆင်းသွားပြီး အဆင့် ၉၃ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရကြောင်း သိရသည်။ ယင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်ဒုက္ခသည် ၇၀၀,၀၀၀ ရုတ်တရက် ၀င်ရောက်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ယခု ၁၂ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးအညွှန်းကိန်း အစီရင်ခံစာကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် IEP သည် အကျိုးအမြတ် ရယူခြင်းမရှိသည့် အကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများနှင့် နယ်မြေများ စုစုပေါင်း ၁၆၃ ခုကို ၎င်းတို့၏ ငြိမ်းချမ်းမှု အဆင့်အလိုက် အမှတ်ပေးကာ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် GPI အစီရင်ခံစာတွင် တင်းမာမှုများ၊ ပဋိပက္ခများနှင့် အကျပ်အတည်းများအတွင်း ကျရောက်နေသည့် ကမ္ဘာကြီးကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း မဖြေရှင်းနိုင်သည့် ပြဿနာများကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများသည်လည်း နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောကြောင့် ငြိမ်းချမ်းမှု ဖြည်းဖြည်းချင်း ကျဆင်းလာရသည်ဟု ဆိုသည်။ ယခု အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အကြားတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၉၂ နိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းမှု ကျဆင်းသွားပြီး ၇၁ နိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းမှု တိုးတက်လာကြောင်း သိရသည်။ ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ တောင်ဆူဒန်၊ အီရတ်နှင့် ဆိုမာလီယာတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီး အိုက်စလန်၊ နယူးဇီလန်၊ သြစတြီးယား၊ ပေါ်တူဂီနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့သည် အငြိမ်းချမ်းဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသည် အဘယ်နည်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လူများအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဘ၀အရည်အသွေးများ တိုးတက်လာအောင် အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အခါ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လူတိုင်းအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို ကြောက်လန့်ရခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းတို့ မရှိဘဲ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်သည့်အခါ ရရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လူတိုင်းအနေဖြင့် ဥပဒေ၏ရှေ့မှောက်၌ မည်မျှစွာရှိခြင်း၊ တရားရေးစနစ်များ ယုံကြည်ရခြင်းနှင့် လူတို့၏ အခွင့်အရေးများကို မျှတပြီး ထိရောက်သည့် ဥပဒေများက ကာကွယ်ပေးထားခြင်းတို့ ရှိသည့်အခါ ရရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လူတိုင်းအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပုံဖော်ရာ၌ ပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အစိုးရက ပြည်သူများအပေါ် တာဝန်ခံမှုရှိသည့်အခါ ရရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လူတိုင်းအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာ၊ သန့်ရှင်းသောရေ၊ နေစရာ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် နေချင်စရာ ၀န်းကျင်တို့အား မျှတညီမျှစွာ ရရှိသည့်အခါ ရရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျား/မ၊ လူမျိုး သို့မဟုတ် မည်သည့် အမျိုးအမည် ခွဲခြားမှုနှင့်မျှမဆိုင်ဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် ညီမျှသော အခွင့်အရေး ရရှိကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်သည့်အခါ ရရှိသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အညွှန်းကိန်း ပြန်လည်မြင့်တက်လျက် မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိပါစေကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်။
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်
Posted in EditorialsTagged ငြိမ်းချမ်းရေး
၂၀၁၇ ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၁၇ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်ကစလို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းအဖြစ် ၂၀၁၇ ဇန်န၀ါရီ ၁
အစိုးရနှင့် သဘောတူညီမှုအသစ် ရရှိပြီးနောက် ဆီးရီးယားသူပုန်များက လက်နက်ချ
အလယ်ပိုင်းပိုင်နက်တစ်ခွင်အတွက် အစိုးရနှင့် သဘောတူညီမှု အသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဆီးရီးယားသူပုန်များသည် မေ ၄ ရက်တွင် ၎င်းတို့၏ လက်နက်ကြီးများကို အပ်နှံခဲ့သည်ဟု ဆီးရီးယားလူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူပုန်မြို့များဖြစ်သည့် Talbisseh ၊ Rastan နှင့် Al-Houla
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်စေရန် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ပုံမှန်ထိတွေ့နိုင်သည့်နေရာမျိုး ရှိသင့်ပြီး နည်းပညာ အထောက်အကူပြု ယန္တရားလည်း ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ရှိရန်လိုကြောင်း သုံးသပ်မှုများရှိနေ
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်စေရန် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ပုံမှန်ထိတွေ့နိုင်သည့်နေရာမျိုး ရှိသင့်ပြီး နည်းပညာ အထောက်အကူပြုယန္တရားလည်း ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ရှိရန်လိုကြောင်း သုံးသပ် ဆွေးနွေးမှုများ ရှိနေသည်။ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားမည်ဆိုသော နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒ ဆုံးဖြတ်ချက် ရှိပြီးသားဖြစ်သဖြင့် ပြောစရာမရှိကြောင်း၊ သို့ရာတွင်
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိုးရနှစ်ရပ်နှင့်ဆွေးနွေးနေသည့်ပုံစံသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်မှုမရရှိနိုင်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သတိပေး
လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်မှုယူရမည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရနှစ်ရပ်နှင့်ဆွေးနွေးနေသည့် ပုံစံသည် ငြိမ်းချမ်းရေးမအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက် တာဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်းက သတိပေး ပြောကြားသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ City Hotel Yangon
viewed: ကိုသိန်း (ကျောက်ကြီး)
စာရေးသူတို့ မိသားစု နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စည်းကမ်းတကျ ခြိုးခြံချွေတာပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဘ၀ရဲ့အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ကာ နေထိုင်ခဲ့မှုကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ မပြုပြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မိဘလက်ငုတ် အိမ်အိုအိမ်ဟောင်းလေးကို ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေ့စဉ်ဖြစ်သလိုစားလာခဲ့ရတဲ့ မိသားစုထမင်း စားဝိုင်းလေးအတွက်